Booliska Itoobiya oo qabtay hub iyo dadkii watay – Banaadir Times
Booliska Itoobiya oo qabtay hub iyo dadkii watay
Booliska ka howlgalla Magaalada Addis Ababa ee Caasimada Itoobiya ayaa sheegay, in gacanta ku dhigeen Hub si xeeladeysan loo soo galiyay Magalada Addis Ababa, kana kooban Qoriga (BKM), Biskoolado iyo 5 Kun oo Rasaas kala duwan ah, kadib dabagal ay samaysay hay’ada sirdoonka iyo nabad sugida dalkaas.
Hubkani ayaa waxaa siday Gaari nuuca loo yaqaano ah Isuzu, kana soo kicitimay Magaalada Gondar ee Deegaanka Axmaarada,waxaana Hubka loo ekeeysiiyay agab caadi ah oo saarnaa Gaariga.
Warbixin Booliska magaalada Addis Ababa soo saaray ayaa lagu sheegay, in Hubka la qabtay uu kala yahay laba (BKM), laba Isneypar , 38 Bistooladaha Waawayn , 25 Bistoolado yaryar, 5992 Rasaasta Qoriga Aakaha, 898 Rasaasta Bistooladaha, 5 Rasaasta Qoriga Isanyparka ah, iyo agabyada Qoryaha, waxaana hubkaas laga qabtay xaafada Gulale, gaar ahaan Dagmada 8aad, Xaafad hoosaadka 7aad.
Booliska ayaa intaasi ku daray in Gacanta lagu soo dhigay, laba rag oo gudbinaysay Hubkan soo na galiyay Magaalada Addis Ababa si dhibato loogu geysto wallow aysan shaacin dadka sigar ah u leh hubkaas.
Ugu dambayntiina booliska ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan hay’adaha nabad galyada, soona sheegaan waxyaabaha ay ka shakiyaan si gacan bir ah loogu qabto.
Dhowr jeer ayaa waxaa Booliska Addis Ababa ay qabteen hub kala duwan oo si qarsoodi ah loo geliyay Magaaladaas, hubkaas oo dadkii lahaa Itoobiya ay Maxkamadeeysay.
Dagaal ka dhacay degmo ka tirsan Gobolka Baay & khasaaro ka dhashay
Shirka Siyaasadda Loo Dhanyahay Oo Looga Hadlay Dawlad-wanaagga Iyo Doorashooyinka 2020+Sawirro